Haftungsausschluss | Option UK
Helmut Melzer, Option Medien eU dia vonona ny hitazona hatrany ity tranokala ity ary hazava tsara. Na izany aza, raha toa ka sendra zavatra tsy mety na lany andro ianao dia hankasitraka izany raha ampahafantarinao anay. Azafady manondro hoe aiza no misy ilay tranokala mamaky ireo vaovao. Hojerentsika haingana araka izay azo atao izany. Alefaso ny mailakao amin'ny alàlan'ny mailaka: office@dieoption.at.
Tsy tompon'antoka amin'ny fatiantoka isika noho ny tsy fahatomombanana na ny tsy fahatomombanana, ary koa ny fahaverezan'ny vokatry ny olana ateraky na noho ny fanaparitahana ny vaovao amin'ny alàlan'ny Internet, toy ny fanelingelenana na fanelingelenana. Rehefa mampiasa takelaka tranokala, dia manandrana mametra ny isan'ireo saha ilaina ilaina izahay. Noho ny fatiantoka nateraky ny fampiasana data, torohevitra na hevitra nomen'ny na ho an'i Helmut Melzer, Option Medien eU amin'ny alàlan'ity tranokala ity, Helmut Melzer, Option Medien eU dia tsy mandray andraikitra.
Ny fampiasana ny tranokala sy ny singa rehetra ao (anisan'izany ny forum) dia miankina amin'ny fepetra fampiasana. Ny fampiasana fotsiny an'ity tranokala ity dia midika ho fahalalana sy ny fanekena ireo teny fampiasana.
Izay angon-drakitra manokana omenao anao amin'ny toe-tsainao ny valin-teninao na ny fangatahanao hahazo fampahalalana dia hampiasaina mifanaraka amin'ny filazanay manokana.
Helmut Melzer, Option Medien eU dia hanao izay rehetra ilaina mba hiarovana ny rafitra ampiasain'izy ireo amin'ny karazana fampiasana tsy ara-dalàna. Helmut Melzer, Option Medien eU dia hametraka fepetra ara-teknika sy fandrindrana ara-teknika mifanaraka amin'izany, amin'ny alàlan'ny fiheverana ny toeran'ny zavakanto. Na izany aza, tsy tokony ho tompon'antoka amin'ny fatiantoka na inona na inona, mivantana sy / na ankolaka, tratry ny mpampiasa tranonkala, izay nipoitra noho ny fampiasana tsy ara-dalàna ny rafitra napetraky ny antoko fahatelo.
Helmut Melzer, Option Medien eU dia tsy mandray andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala izay misy na avy amin'ny paikady na firesahana hafa. Ny vokatra na serivisy natolotry ny andaniny fahatelo dia iharan'ny fepetra sy ny fepetra ampahan'ireo antoko fahatelo ireo.
Ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao amin'ity tranokala ity dia ao Helmut Melzer, Option Medien eU na amin'ireo antoko fahatelo nametraka ny atiny na avy amin'i Helmut Melzer, Option Medien eU dia nahazo fahazoan-dàlana mpampiasa.
Ny fandikana, ny fanaparitahana ary ny fampiasana hafa ireo fitaovana ireo dia tsy ekena raha tsy nahazo alalana nosoratan'i Helmut Melzer, Option Medien eU, afa-tsy ary tsy misy afa-tsy izay voafaritry ny lalàna mifehy (toy ny zo hilazana) raha tsy izany.
Raha manana fanontaniana na olana ianao amin'ny fidirana amin'ny tranokala, azafady aza misalasala mifandray aminay.